रणवीरले आफ्नो पात्र निर्वाह गरेकोमा सञ्जय दत्तको प्रतिक्रिया कस्तो ?
काठमाडौं, ३० जेठ – रणवीर कपूरले सञ्जय दत्तको जीवनीमा आधारित रही खेलेको फिल्म सञ्जु छिट्टै सार्वजनिक हुँदैछ । फिल्मको ट्रेलरले राम्रो प्रशंसा बटुलिरहेको छ ।
ट्रेलरमा कतैकतै रणवीरले सञ्जयलाई हुबहु कपी गरेका छन् ।
सञ्जय दत्त आफैं चाहिँ रणवीरको प्रदर्शनका बारेमा के भन्छन् त ?
उनी भन्छन्, ‘रणवीरले शानदार काम गरेका छन् । फिल्मको केही दृश्यहरू मैले हेरेको छु, ती जबर्जस्त छन् । म उनलाई शुमकामना दिन्छु र र यो फिल्म हेर्न चाहन्छु ।’
फिल्मको शूटिङ शुरू भएको केही दिनमा सञ्जयको घरमा पार्टी राखिएको थियो । पार्टीमा सञ्जयले रणवीरमा हप्काएका थिए । ‘तिमी मेरो भूमिकाका लागि फिट छैनौ’ भनेका थिए ।
रणवीरसँग मस्क्युलर बडी नभएकाले आफ्नो भूमिकामा फिट नभएको सञ्जयको भनाइ थियो ।
सञ्जयले भने, ‘केही दिनअघि मैले टीभीमा बर्फी फिल्म हेरें । के सोचेर तिमीले यस्तो फिल्म गरेको ? अनि तिमीले मेरो जीवनीमा मेरो भूमिका निर्वाह गर्ने ? कसले तिमीलाई यो रोलका लागि कास्ट ग–यो ? तिमी पनि बन्दूक समातेर
एक्सन फिल्म गर, बर्फी जस्ता फिल्म गर्ने हैन ।’
तर अहिले सञ्जयको प्रतिक्रिया हेर्दा त रणवीरले सञ्जुमा गरेको अभिनयले मन जितेको देखिन्छ ।
राजकुमार हिरानीले निर्देशन गरेको यो फिल्म असार १५ गते रिलिज हुँदैछ । फिल्ममा रणवीरका अलावा मनीषा कोइराला, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा, करिश्मा तन्ना, परेश रावल र जिम सर्भ पनि छन् ।
‘मानिसलाई ईदमा रुवाएँ त्यसैले मेरो फिल्म फ्लप भयो’
कपिल शर्मा पिता बन्ने !
विवेकको विवादित ट्वीटप्रति सलमानले के भने ?